कसौटी 'बाबुराम' का- विविधा - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २८, २०७६ विमल निभा
(यसको पुरा नाम जेसुकै भए तापनि यो उपेन्द्र यादवको ब्रान्डेड फोरम नै हो ।) तसर्थ नयाँ पार्टी परिवर्तनपश्चात पनि उनले आफ्नो पुरानो नयाँपन चाहिंँ दुरुस्तै राखेकोमा प्रशंसा गर्नैपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा बाबुराम भट्टराईलाई एक बौद्धिक आभामण्डल भएको नेताको रूपमा चिन्हित गरिन्छ । यस सम्बन्धमा केही बौद्धिक राजनीतिक विश्लेषकहरू अलिक फरक कुरा पनि गर्छन् । यसलाई एक प्रकारको उनको बौद्धिकताप्रतिको असहमति मान्ने हो भने पनि बाबुरामको बौद्धिकपनमा पूर्णतः सहमत हुनेहरू पनि कम्ता छैनन् ।
हो, केही बौद्धिकहरूचाहिँं सहमत तथा असहमत दुवै एकसाथ रहेका छन् । अब यी बौद्धिकहरूले जेसुकै भने पनि हामीजस्ता नितान्त अबौद्धिकहरूमाझ उनको बौद्धिकताको गहिरो छाप परेकोमा कुनै द्विविधा छैन । अँ, नेपालमा मात्र नभएर बाबुराम भट्टराईको बौद्धिक व्यक्तित्वको पहुँच सीमापारि हिन्दुस्तानमा पनि जबर्जस्त ढंगले रहेको छ । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने उनी हिन्दुस्तानको विख्यात शिक्षण संस्थान ‘जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी’ का एक नाम चलेका भूतपूर्व विद्यार्थी हुन् ।
अर्थात् त्यहाँबाट उच्च विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई । म उनको चलनचल्तीको बौद्धिक आतंकबाट व्यक्तिगत तवरले ग्रस्त रहेको छु । यसको लिखित प्रमाणको रूपमा मैले उनी जनयुद्धमा व्यस्त रहँदा रचेको कविता पढ्नोस्– चप्पल । वास्तवमा उनी एक अपार सम्भावनायुक्त नेता भएकोमा कुनै शंका छैन । तर उनको यावत् सम्भावना अन्ततः फोरममा गएर समाहित हुनेछ भनी मैले कदापि सोचेको थिइन । तर डाक्टरसाबले मेरो सोच अनुकूल चल्नुपर्छ भन्ने केही छैन । उनको आफ्नो विलकुलै निजी सोच रहेको छ । यस अनुसार उनी विसं २०७६ वैशाख २३ गते सोमबारबाट एकदिन नयाँ उपेन्द्र फोरमवादी नेताको रूपमा नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा उदित भएका छन् ।
‘बधाई छ, नेताजी ।’ मेरो ‘बनारसी पान भण्डार’ मा एक फोरम नेतासँग भेट भयो ।
‘केको बधाई ?’ उनले डबल पानको विडा मुखमा हुले ।
‘अब यतिका अनजान पनि नबन्नोस् नेताजी ।’
‘होइन, केको बधाई ?’ उनले उनी वाक्य दोहोर्‍याए ।
‘तपाईहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो पार्टीमा लिएकोमा ।’ मैले कुरा खुलाएर भनेंँ, ‘उनी एक ठूलो नेता हुन् ।’
‘ए....।’ उनले पानको पिक घुटुक्क निलेर मलाई हेरे । त्यसपछि स्वर मन्द भयो, ‘बाबुराम भट्टराईलाई....।’ अनि लगत्तै चुप लागे । केही भन्ने प्रयास गरेनन् ।
मेरो परिचित फोरमका नेताको कुरो मैले बुझ्न सकिन । एकता उनको आवाज मुखभरिको पानको थुकमा लत्पत्तिएको थियो, अर्को उनी कुट भावमा अधुरो वाक्यको प्रयोग गरिरहेका थिए । यस्तोमा मैले के र कसरी बुझ्ने ? त्यसैले मैले फोरम नेतालाई भनेँ, ‘तपाईले के भन्न खोज्नुभएको हो, नेताजी ?’
‘हेर्नोस्, बाबुरामजी हामीकहाँ जरुर आएका छन् ।’ एकछिन अडेर रहस्यमय पाराले मुस्कुराए, ‘अब उनी कतै पनि जाँदैनन् ।’
एकाएक मलाई छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानको एक लोकप्रिय टेलिभिजन सिरियल ‘कसौटी जिन्दगीका’ को स्मरण भयो । कुनै बखत त्यहाँ हमलोग, सास भी कभी बहु थी, कुम–कुम भाग्य, इस प्यारका क्या नाम दुँ, जिन्दगी की महक, बहुत अच्छे लगते हैं, साथ निभाना साथीया, दिल मिल गया, पवित्र रिस्ता जस्ता सिरियलहरू पनि उत्तिकै चल्ने गर्थे । तर ‘कसौटी जिन्दगीका’ को कुरै अर्को थियो । यो पारिवारिक (?) टेलिभिजन सिरियल नेपालमा पनि खुबै हेरिने गरिन्थ्यो । प्रत्येक सप्ताह नियमित आउने याने कहिल्यै नसकिने लम्बेतान सिरियल । तर एक दिन भयो के भने यो अचम्मैले आउन छाड्यो । कुन्नि, कता अलमलियो !
के मेरा परिचित फोरम नेताले बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक नियतिको सन्दर्भमा यस्तै केही भन्न खोजेका हुन् त ? डाक्टरसाब पहिले पञ्चायतका बौद्धिक नेता ऋषिकेश शाहको अति निकटमा थिए । त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महासचिव कमरेड मोहनविक्रम सिंहको सम्पर्कमा आएर कम्युनिस्ट भए । अनि केही समयपछि अर्को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा पुगे ।
र त्यहाँबाट पनि आफ्नै गैरकम्युनिष्ट पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको निर्माण गरेर गए । अब फोरमवादी भएर उपेन्द्र यादवकहाँ पुगेका छन् । के यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धारावाहिक राजनीतिक व्यक्तित्वको आखिरी पार्टीगत विश्राम हो ? यस्तो नहुन पनि सक्छ । किनभने एक्कासी सकियो भनेको हिन्दुस्तानी टेलिभिजन सिरियल ‘कसौटी जिन्दगीका’ एकपटक फेरि एउटा अर्को च्यानलबाट निरन्तर प्रसारित भइरहेको छ ।
कहिलेकाहीं एउटा बृहत् औपन्यासिक मेटेरियल अलमलिएर फगत शीर्षकमै विलुप्त भएर जान्छ । केही लेख्न सकिँंदैन । एक लेखकको नाताले मेरो यस्तो एकाध अनुभव रहेको छ । के गर्न सकिन्छ ? म हिन्दुस्तान र नेपाल, दुवैतिर उत्तिकै चर्चित डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बहुआयामिक व्यक्तित्वका लागि एक तीन लाइनको हाइकु समर्पित गरेर विदा हुन्छु ।
‘अकासिएको वटवृक्ष यसको बैठक कोठाकोएक सुन्दर बोन्साइ ।’ प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ ०८:५६
बालुवाटार जमिन प्रकरणमा कवि एवं गीतकार दिनेश अधिकारीको नाम आएको छ । यसले यसमा एउटा कलात्मक साहित्यिक ‘टच’ दिएको छ । अतः साहित्य जगतमा अपार हर्ष छाएको छ । मेरो हार्दिक बधाई छ, कवि मित्र !
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:२१